Chelsea oo afar gool afka u galisay kooxda Brentford oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Stamford Bridge, una soo baxday wareegga 5-aad ee FA Cup… + SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo afar gool afka u galisay kooxda Brentford oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Stamford Bridge, una soo baxday wareegga 5-aad ee FA Cup… + SAWIRRO
(London) 28 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa 4-0 ku garaacay naadiga Brentford oo marti ugu ahayd garoonka Stamford Bridge, waxaana Blues ay u soo baxday wareegga 5-aad ee FA Cup.
Chelsea ayaa goolka hore waxaa u dhaliyey 14’daqiiqo Willian, waxaana xiddiga reer Brazil uu shabaqa ku hubsaday laad xor ah oo toos ah kaasoo uu ka soo tuuray afarka hore ee xerda ganaaxa Brentford, kulanka ayaana sidaas ku noqday 1-0 ay hoggaanka ciyaarta ku qabtay Chelsea.
Intii lagu guda jiray qeybtii hore ee ciyaarta 21’daqiiqo Blues ayaa goolkeeda labaad ee kulanka la yimid waxaana u dhaliyey Pedro Rodriguez, kaddib markii uu labada lugood ee goolwalaha Brentford ka dhex dusiyey kubbad ay ka soo shaqeeyeen xiddigaha Blues, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-0 lagu hoggaaminayey kooxda Brentford.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda Chelsea ayaa la timid goolka saddexaad, waxaana 70’daqiiqo u dhaliyey difaacooda Branislav Ivanovic, kaddib markii uu dhammaystiray baas uu ka helay Pedro, kaasoo kulanka ka dhigay 3-0.
81’daqiiqo dhammaadkii ciyaarta waxaa goolka afaraad Chelsea ku soo xiray Michy Batshuayi, kaasoo ahaa gool ku laad, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 4-0 ay Blues ku garaacay Brentford.
Antonio Conte waxa uu isha ku hayaa in uu Chelsea la qaado Premier League-ga iyo FA Cup-ka oo wada socda isla sidii uu sameeyey Carlo Ancelotti ololihiisii ugu horreeyey ee England.
TOOS u daawo: Southampton vs Arsenal - LIVE
Manchester City oo u gudubtay wareegga 5-aad ee FA Cup, kaddib markii ay garaacday kooxda Crystal Palace oo ay booqatay iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO